14 Nov 2018 . 7:29 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာ ‘Untouchable’ ဖြစ်နေဆဲ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဥပမာဆိုရင် နယူးကာဆယ် ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး အလန်ရှီးယား Alan Shearer ရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံး(၂၆၀ ဂိုး) စံချိန်၊ ဗီလာနဲ့ မန်စီးတီး ကစားသမားဟောင်း ဘယ်ရီ Gareth Barry ရဲ့ လိဂ်ပွဲအများဆုံး (၆၅၃ပွဲ)စံချိန် စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တချို့စံချိန်တွေကတော့ ကျိုးပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာလည်း သမိုင်းဝင် စံချိန်သစ်စိုက်ထူခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမား၊ နည်းပြတွေ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ သူတို့တွေက ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်လို စံချိန်တွေ ရယူခဲ့လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . . .
မီလ်နာ James Milner ရဲ့ ပယ်နယ်တီမှတ်တမ်း
လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အင်္ဂလန်ဝါရင့်ကွင်းလယ်လူ မီလ်နာဟာ ဒီရာသီမှာ ထူးထူးခြားခြား ပယ်နယ်တီ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ မီလ်နာဟာ သြဂုတ်လ(၁၈)ရက်က ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပယ်နယ်တီကနေ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး ဒါဟာ သူ့အတွက် (၈)ပွဲဆက် ပယ်နယ်တီကနေ ဂိုးသွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ပွဲဆက်အများဆုံး ပယ်နယ်တီသွင်းယူခဲ့သူက ကာဇိုလာ Santi Carzola ၊ အာတီတာ Mikel Arteta ၊ ဒန်နီမာဖီ Danny Murphy ၊ မိုလ်ဘီ Jan Molby တို့ဖြစ်ပြီး (၇)ပွဲဆက် ဂိုးသွင်းခဲ့တာပါ။ အဲဒီစံချိန်ကို မီလ်နာက တစ်ပွဲအသာနဲ့ ချိုးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခု ရယူခဲ့တဲ့ ဆက်ဆီနွန် Ryan Sessegnon
ဖူလ်ဟမ်အသင်းရဲ့ အင်္ဂလန်လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ရိုင်ယန်ဆက်ဆီနွန်ကလည်း ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်း တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလလယ်တုန်းက ကာဒစ်ဖ်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့တာကြောင့် ၂၁ ရာစုမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေထဲ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆီနွန်ရဲ့ အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ရလဒ်တွေဆိုးရွားနေပြီး အမှတ်ပေးဇယားအောက်ခြေရောက်နေလို့ ဆက်ဆီနွန်အနေနဲ့ ဒီထက် ပိုခြေစွမ်းပြဖို့တော့ လိုနေပါပြီ။
စပါးနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် နှစ်သင်းပေါင်း သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ အရင်က ပရီးမီးယားလိဂ် စံချိန်ဖြစ်ခဲ့တာ အာဆင်နယ်-အဲဗာတန်ပွဲဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်သင်းဆုံတွေ့တဲ့ပွဲမှာ စုစုပေါင်း(၁၅၁)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တာပါ။ စပါးနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့ဟာ ဒီရာသီမတိုင်ခင်က (၁၄၉)ဂိုးနဲ့ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလတုန်းက ဒီနှစ်သင်း ဆုံတွေ့ခဲ့တော့ လီဗာပူးလ်အသင်းက (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် အာဆင်နယ်-အဲဗာတန်အသင်းတို့ရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
(၁၄)နှစ်ကြာမြင့်နေတဲ့ စံချိန်ကို ချိုးဖြတ်ခဲ့သူ ဆာရီ Maurizio Sarri
ဒီရာသီမှ အင်္ဂလန်မြေကို ခြေချခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဆာရီဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ရာသီမှာပဲ စံချိန်သစ်တစ်ခု ရရှိခဲ့တယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအစ (၁၂)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်တုန်းက နော်တင်ဟမ်အသင်းနည်းပြ Frank Clark တင်ရှိခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာ ပွဲဆက်အများဆုံး ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ မှတ်တမ်းကို တစ်ပွဲအသာနဲ့ ချိုးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ (၃)သင်းထဲမှာ ပါဝင်နေသလို ဥရောပမှာ ပြိုင်ပွဲစုံ ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ တစ်သင်းတည်းသော ကလပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
Photo:Cartilage Free Captain,Football FanCast,sportskeeda,Mypleskit Press
စံခြိနျမှတျတမျးသဈတှေ ထှကျပျေါခဲတဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ပရီးမီးယားလိဂျ
ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးမှာ ‘Untouchable’ ဖွဈနဆေဲ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှေ ရှိနတေုနျးပါပဲ။ ဥပမာဆိုရငျ နယူးကာဆယျ ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး အလနျရှီးယား Alan Shearer ရဲ့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး(၂၆၀ ဂိုး) စံခြိနျ၊ ဗီလာနဲ့ မနျစီးတီး ကစားသမားဟောငျး ဘယျရီ Gareth Barry ရဲ့ လိဂျပှဲအမြားဆုံး (၆၅၃ပှဲ)စံခြိနျ စသဖွငျ့ပေါ့။ ဒါပမေဲ့ တခြို့စံခြိနျတှကေတော့ ကြိုးပွတျသှားပွီဖွဈပါတယျ။ ဒီရာသီမှာလညျး သမိုငျးဝငျ စံခြိနျသဈစိုကျထူခဲ့ကွတဲ့ ကစားသမား၊ နညျးပွတှေ ထှကျပျေါလာပါပွီ။ သူတို့တှကေ ဘယျသူလဲ၊ ဘယျလို စံခြိနျတှေ ရယူခဲ့လဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . . .
မီလျနာ James Milner ရဲ့ ပယျနယျတီမှတျတမျး
လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အင်ျဂလနျဝါရငျ့ကှငျးလယျလူ မီလျနာဟာ ဒီရာသီမှာ ထူးထူးခွားခွား ပယျနယျတီ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တယျ။ မီလျနာဟာ သွဂုတျလ(၁၈)ရကျက ခရစ်စတယျပဲလစျေ့နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ပယျနယျတီကနေ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး ဒါဟာ သူ့အတှကျ (၈)ပှဲဆကျ ပယျနယျတီကနေ ဂိုးသှငျးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ ပှဲဆကျအမြားဆုံး ပယျနယျတီသှငျးယူခဲ့သူက ကာဇိုလာ Santi Carzola ၊ အာတီတာ Mikel Arteta ၊ ဒနျနီမာဖီ Danny Murphy ၊ မိုလျဘီ Jan Molby တို့ဖွဈပွီး (၇)ပှဲဆကျ ဂိုးသှငျးခဲ့တာပါ။ အဲဒီစံခြိနျကို မီလျနာက တဈပှဲအသာနဲ့ ခြိုးဖွတျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
မှတျတမျးကောငျးတဈခု ရယူခဲ့တဲ့ ဆကျဆီနှနျ Ryan Sessegnon
ဖူလျဟမျအသငျးရဲ့ အင်ျဂလနျလူငယျတိုကျစဈမှူး ရိုငျယနျဆကျဆီနှနျကလညျး ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျး တဈခုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလလယျတုနျးက ကာဒဈဖျနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ အသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးခဲ့တာကွောငျ့ ၂၁ ရာစုမှာ မှေးဖှားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှထေဲ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားဖွဈခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဆကျဆီနှနျရဲ့ အသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ ရလဒျတှဆေိုးရှားနပွေီး အမှတျပေးဇယားအောကျခွရေောကျနလေို့ ဆကျဆီနှနျအနနေဲ့ ဒီထကျ ပိုခွစှေမျးပွဖို့တော့ လိုနပေါပွီ။
စပါးနဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးတို့ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ပှဲဟာ ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ နှဈသငျးပေါငျး သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ အရငျက ပရီးမီးယားလိဂျ စံခြိနျဖွဈခဲ့တာ အာဆငျနယျ-အဲဗာတနျပှဲဖွဈပွီး ဒီနှဈသငျးဆုံတှတေဲ့ပှဲမှာ စုစုပေါငျး(၁၅၁)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တာပါ။ စပါးနဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးတို့ဟာ ဒီရာသီမတိုငျခငျက (၁၄၉)ဂိုးနဲ့ ဒုတိယအမြားဆုံးဖွဈနပေမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလတုနျးက ဒီနှဈသငျး ဆုံတှခေဲ့တော့ လီဗာပူးလျအသငျးက (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ အာဆငျနယျ-အဲဗာတနျအသငျးတို့ရဲ့ စံခြိနျကို ကြျောဖွတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
(၁၄)နှဈကွာမွငျ့နတေဲ့ စံခြိနျကို ခြိုးဖွတျခဲ့သူ ဆာရီ Maurizio Sarri
ဒီရာသီမှ အင်ျဂလနျမွကေို ခွခေခြဲ့တဲ့ ခယျြလျဆီးနညျးပွဆာရီဟာ ပရီးမီးယားလိဂျအဖှငျ့ရာသီမှာပဲ စံခြိနျသဈတဈခု ရရှိခဲ့တယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးကို ပရီးမီးယားလိဂျရာသီအစ (၁၂)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့ပွီး ၁၉၉၄ ခုနှဈတုနျးက နျောတငျဟမျအသငျးနညျးပွ Frank Clark တငျရှိခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျရာသီမှာ ပှဲဆကျအမြားဆုံး ရှုံးပှဲမရှိတဲ့ မှတျတမျးကို တဈပှဲအသာနဲ့ ခြိုးဖွတျခဲ့တာပါ။ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရှုံးပှဲမရှိသေးတဲ့ (၃)သငျးထဲမှာ ပါဝငျနသေလို ဥရောပမှာ ပွိုငျပှဲစုံ ရှုံးပှဲမရှိသေးတဲ့ တဈသငျးတညျးသော ကလပျဖွဈနပေါတယျ။